ဆာကီမာရဲ့သီချင်း - Storybooks ESL
ဆာကီမာရဲ့သီချင်း Sakima's song
Naw Thazin Hpway
ဆာကီမာဟာ သူ့ရဲ့ညီမလေးနဲ့အတူ မိဘတွေနဲ့ နေထိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အရမ်းချမ်းသာတဲ့ သူဌေးကြီးတစ်ယောက်ရဲ့မြေမှာ နေထိုင်ပါတယ်။ သစ်ပင်တန်းတွေရဲ့အဆုံးမှာ မြက်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ သူတို့ရဲ့တဲကလေးရှိပါတယ်။
Sakima lived with his parents and his four year old sister. They lived onarich man’s land. Their grass-thatched hut was at the end ofarow of trees.
ဆာကီမာသုံးနှစ်အရွယ်မှာ သူဟာ အပြင်းဖျားပြီး အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။ ဆာကီမာဟာ ထူးချွန်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
When Sakima was three years old, he fell sick and lost his sight. Sakima wasatalented boy.
ဆာကီမှာဟာ အခြားသော ၆နှစ်အရွယ် ကောင်လေးတွေမလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေတော်တော်များများကို လုပ်ပါတယ်။ ဥပမာ - ရွာမှာရှိတဲ့လူကြီးတွေနဲ့ ထိုင်ပြီး အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးပါတယ်။
Sakima did many things that other six year old boys did not do. For example, he could sit with older members of the village and discuss important matters.
ဆာကီမာရဲ့မိဘတွေဟာ ချမ်းသာတဲ့ သူဌေးကြီးတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ မနက်စောစောအိမ်ကထွက်သွားပြီး ညနေနောက်ကျမှ အိမ်ကိုပြန်ရောက်ပါတယ်။ ဆာကီမာဟာ သူ့ရဲ့ညီမလေးနဲ့ဘဲ ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။
The parents of Sakima worked at the rich man’s house. They left home early in the morning and returned late in the evening. Sakima was left with his little sister.
ဆာကီမာဟာ သီချင်းဆိုရတာ ကြိုက်ပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ သူ့အမေက “ဆာကီမာ, သားဒီသီချင်းတွေက ဘယ်ကနေ သင်ယူရရှိခဲ့သလဲ” လို့မေးပါတယ်။
Sakima loved to sing songs. One day his mother asked him, “Where do you learn these songs from, Sakima?”
ဆာကီမာက “အမေရေ ဒီအတိုင်းထွက်လာတာဘဲ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ခေါင်းထဲကနေသီချင်းသံတွေ ကြားပြီး ကျွန်တော် ဆိုလိုက်တာဘဲ” လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။
Sakima answered, “They just come, mother. I hear them in my head and then I sing.”
ဆာကီမာဟာ သူ့ညီမလေးဗိုက်ဆာနေတဲ့အချိန်တိုင်းလည်း သီချင်းဆိုပေးပါတယ်။ သူ့ညီမလေးဟာ သူအကြိုက်ဆုံးသီချင်းကို နားထောင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ စိတ်သက်သာရာရာစေတဲ့တေးသွားနဲ့ သူဟာလွင့်မျှောသွားပါတယ်။
Sakima liked to sing for his little sister, especially, if she felt hungry. His sister would listen to him singing his favourite song. She would sway to the soothing tune.
ဆာကီမာရဲ့ညီမလေးက “ဆာကီမာရေ, နောက်တစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက် ဆိုပြပါလား” လို့တောင်းဆိုပါတယ်။ ဆာကီမာက လက်ခံပြီး ထပ်ခါထပ်ခါ ဆိုပြပါတယ်။
“Can you sing it again and again, Sakima,” his sister would beg him. Sakima would accept and sing it over and over again.
တစ်ညနေတော့ သူ့ရဲ့မိဘတွေဟာ အိမ်ပြန်လာပြီး တိတ်ဆိတ်နေကြပါတယ်။ ဆာကီမာက တစ်ခုခုမှားယွင်းနေပြီဆိုတာ ဆာကီမာသိလိုက်ပါတယ်။
One evening when his parents returned home, they were very quiet. Sakima knew that there was something wrong.
ဆာကီမာက “အမေ၊ အဖေ ဘာတွေမှားယွင်းနေတာလဲ” လို့မေးလိုက်ပါတယ်။ ဆာကီမာက သူဌေးကြီးရဲ့သား ပျောက်သွားကြောင်း သိလိုက်ရပါတယ်။ သူဌေးကြီးဟာ အရမ်းဝမ်းနည်းပြီး အထီးကျန်နေပါတယ်။
“What is wrong, mother, father?” Sakima asked. Sakima learned that the rich man’s son was missing. The man was very sad and lonely.
ဆာကီမာက သူ့မိဘတွေကို “ကျွန်တော် သူ့အတွက် သီချင်းဆိုပေးနိုင်ပါတယ်” လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့မိဘတွေက ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ “သူဟာ အရမ်းကိုချမ်းသာတယ်။ သားကမျက်မမြင်တစ်ယောက်ဘဲ။ သားရဲ့သီချင်းတွေက သူ့ကိုကူညီနိုင်မယ်လို့ ထင်သလား။”
“I can sing for him. He might be happy again,” Sakima told his parents. But his parents dismissed him. “He is very rich. You are onlyablind boy. Do you think your song will help him?”
ဒါပေမယ့် ဆာကီမာက အရှုံးမပေးခဲ့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ညီမကလေးက သူ့ကိုထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ သူ့ညီမလေးက “ဆာကီမာရဲ့သီချင်းတွေဟာ သမီးဗိုက်ဆာတဲ့အချိန်မှာ သက်သာမှုကိုပေးစေတယ်။ သူတို့ဟာ သူဌေးကြီးကိုလည်း သက်သာရာရစေနိုင်မှာပါ။” လို့ပြောပါတယ်။
However, Sakima did not give up. His little sister supported him. She said, “Sakima’s songs soothe me when I am hungry. They will soothe the rich man too.”
နောက်တစ်နေ့မှာတော့ ဆာကီမာဟာ သူ့ညီမလေးကို သူဌေးကြီးအိမ်ဆီ လိုက်ပို့ခိုင်းပါတယ်။
The following day, Sakima asked his little sister to lead him to the rich man’s house.
သူဟာ ပြတင်းပေါက်ကြီးတစ်ခုနားမှာရပ်ပြီး သူအကြိုက်ဆုံးသီချင်းကို သီဆိုနေပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူဌေးကြီးဟာ ပြတင်းပေါက်ကြီးကနေ ခေါင်းပြူထွက်လာပါတယ်။
He stood below one big window and began to sing his favourite song. Slowly, the head of the rich man began to show through the big window.
အလုပ်သမားတွေကလည်း သူတို့လုပ်နေတာတွေကို ရပ်လိုက်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဆာကီမာရဲ့ လှပတဲ့သီချင်းကို နားဆင်နေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသားတစ်ယောက်က “ငါတို့သူဌေးကို ဘယ်သူကမှ နှစ်သိမ့်မပေးဖူးဘူး။ ဒီမျက်မမြင်ကောင်လေးဟာ သူ့ကိုနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်မယ်လို့ ထင်နေသလား” လို့မေးတယ်။
The workers stopped what they were doing. They listened to Sakima’s beautiful song. But one man said, “Nobody has been able to console the boss. Does this blind boy think he will console him?”
ဆာကီမာဟာ သီချင်းဆိုပြီးတဲ့အခါ ပြန်ဖို့လှည့်ထွက်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဌေးကြီးဟာ အပြင်ကို အမြန်ထွက်လာပြီး “ကျေးဇူးပြုပြီး နောက်တစ်ခေါက်ဆိုပြပါလား” လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။
Sakima finished singing his song and turned to leave. But the rich man rushed out and said, “Please sing again.”
အဲ့ဒီအချိန်မှာဘဲ လူနှစ်ယောက်ဟာ ထမ်းစင်နဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သယ်လာပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူဌေးကြီးရဲ့ သား အရိုက်ခံရပြီး လမ်းဘေးမှာပစ်ထားခံရတာကို တွေ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။
At that very moment, two men came carrying someone onastretcher. They had found the rich man’s son beaten up and left on the side of the road.
သူဌေးကြီးဟာ သူ့ရဲ့သားကို တစ်ခါပြန်တွေ့လို့ အလွန်ဝမ်းသာနေပါပြီ။ သူ့ကို နှစ်သိမ့်ပေးတဲ့ ဆာကီမာကို ဆုချလိုက်ပါတယ်။ သူဟာ သူ့သားနဲ့ ဆာကီမာကို ဆေးရုံခေါ်သွားပြီး ဆာကီမာကိုတော့အမြင်အာရုံပြန်ရဖို့အတွက် ခေါ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
The rich man was so happy to see his son again. He rewarded Sakima for consoling him. He took his son and Sakima to hospital so Sakima could regain his sight.
Illustrated by: Peris Wachuka
Translated by: Naw Thazin Hpway
Source: Sakima's song from African Storybook
အနာစီနှင့် ဉာဏ်ပညာ မြို့ကိုသွားဖို့အတွက် အိမ်ကနေထွက်ခွာလာခြင်း